Translate Croatian to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Croatian to Myanmar (Burmese), Croatian to Myanmar (Burmese) translations, Croatian to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Machine translated text(Myanmar (Burmese))
Bok, kako si မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Ima li itko? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Volim te jako toliko ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Koliko košta ovaj hamburger? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Možete li me zvati taksijem? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
Žao mi je ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
Ispričajte me တဆိတ်လောက်
ja sam zainteresiran ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Moj je let kasnio အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Ovdje sam za posao ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Pozdrav moje ime je မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Žao mi je, ali oženjen sam ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
volio bih te pitati ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Možete li me odvesti do zračne luke? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Kakvo je vrijeme upravo sada, molim vas? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Gdje je najbliža policijska postaja? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Mogu li posuditi punjač telefona molim vas? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Možeš li mi pomoći? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Naručite mi piće, molim vas? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Koliko to kosta? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Alergičan sam na gluten ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Nazovite liječnika ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Postoji li liječnik? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Mogu li dobiti poziv? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Pozovite svog šefa molim vas. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Ovo mjesto je jako lijepo ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Odvedi me u hotel molim ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Koji je moj broj soba? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?